feed premix ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China feed premix Factory
4% middle pig feed premix KG content VA IU 60,000-162,000 Fe g 1-8 VD3 IU 25,000-125,000 Cu g 0.125-0.625 VE mg≥ 600 Zn g 1-2 VK3 mg 15-150 Mn g 0.25-3.5 VB1 mg Se 20 Se mg 3-12.5 VB2 mg≥ 160 I mg≥ 10 VB6 mg≥ 25 L-lysine % ≥ 3.9 VB12 mg≥ 0.3 Ca % 8-20 Nicotinic acid mg≥ ...
၄% မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသော ၀ က်များ KG ပါဝင်မှု VA IU 80,000-175,000 Fe g 1.2-8 VD3 IU 30,000-125,000 Cu g 0.15-0.625 VE mg≥ 1000 Zn g 1.2-2.5 VK3 mg 30-250 Mn g 0.35-3.5 VB1 mg≥ 30 Se mg 4-12.5 VB2 mg≥ 100 I mg≥ 10 VB6 mg≥ 40 L-lysine % ≥ 2.5 VB12 mg≥ 0.4 Ca % 10-20 Nicotinic acid mg≥ 600 tatol P % 1.5-4 D-Pantothenate mg ≥500 Nacl % 8-15 Folic acid mg≥ ၁၂၀ ...
Premixes ကိုသတ္တုဓာတ်များ၊ ဗီတာမင်များနှင့်သဲလွန်စများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအင်ဇိုင်းများ၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်ယူမှုများစသည်ဖြင့်များစွာထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်များ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်ကုန်ကြမ်းများကိုပြီးအောင်ထိန်းညှိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် premix, duck feed additives, layer feed additives နှင့် son on တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအားတို့အထိကြီးထွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုနိုင်ငံများစွာသို့တင်ပို့သည်။ ...
ပေါင်းစပ် premix multivitamin အမှုန့်
ကျွန်ုပ်တို့သည် premix, duck feed additives, layer feed additives နှင့် son on တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအားတို့အထိကြီးထွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို/စတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်စသည့်နိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM/ODM ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ fomulation အဖွဲ့များမှဖန်တီးသော standard premix ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်သောကုန်ကြမ်းများ၊ မျိုးစိတ်များနှင့်ကြီးထွားမှုအဆင့်များအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖော်မြူလာများကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Premixes ကိုသတ္တုဓာတ်များ၊ ဗီတာမင်များနှင့်သဲလွန်စများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအင်ဇိုင်းများ၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်ယူမှုများစသည်ဖြင့်များစွာထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်များ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်ကုန်ကြမ်းများကိုပြီးအောင်ထိန်းညှိပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ fomulation အဖွဲ့များမှဖန်တီးသော standard premix ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်သောကုန်ကြမ်းများ၊ မျိုးစိတ်များနှင့်အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်များအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖော်မြူလာများကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
PIG PREMIX 4% PREGNANT ဗီတာမင် A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, Copper sulfate, Zinc sulfate, Manganese sulfate, Sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease စသည်တို့ကိုရောစပ်ကြေး ...
PIG PREMIX 4% PIGLET ပါဝင်သောဗီတာမင် A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, Copper sulfate၊ Zinc sulfate, Manganese sulfate, Sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease စသည်တို့ကို DOSAGE By ။ .။
၅% ဘဲသားကျွေးသော premix ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, Copper sulfate၊ Zinc sulfate, Manganese sulfate, Sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease စသည်တို့ကို DOSAGE By ။ .။
3% finisher layer premix ဖြစ်သည်
premixes များသည်အရည်အသွေးမြင့်မျှတသောရောစပ်မှုများဖြစ်သည်။ သီကုံးမှုများသည်ကြက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ်၊ သိုး၊ DufaMix premixes များကို ၀ ယ်သူ ဦး စားပေးအပေါ် မူတည်၍ ၀.၀၁% မှ ၂.၅% အထိပါဝင်နိုင်သည်။ အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများ၊ အင်ဇိုင်းများ၊ mycotoxin binders များနှင့်အနံ့အရသာများပါဝင်ခြင်းသည်အစာကိုတန်ဖိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်အရောအနှောကိုထည့်ရန်ဥပမာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှုများသည်အလွန်လိုအပ်သောဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ စုပ်ယူနိုင်သောဒြပ်စင်များနှင့်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနှင့်အင်ဇိုင်းများကဲ့သို့ပေါင်းစပ်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းဓာတ်ကိုကြက်၊ ၀ က်သားနှင့် ၀ က်တို့အပါအ ၀ င်မျိုးစိတ်အားလုံး၏လိုအပ်ချက်အတိအကျပေါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်သည်။ feed concentrates ကို ၀ ယ်သူ ဦး စားပေးအပေါ်မူတည်ပြီးပြီးပြည့်စုံသော feed ၏ ၂.၅% မှ ၃၅% အထိပါဝင်နိုင်သည်။ အစာအာရုံစူးစိုက်မှုဖွဲ့စည်းမှုကို အခြေခံ၍ တီထွင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ fomulation အဖွဲ့များမှဖန်တီးသော standard premix ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်၎င်းတို့၏ရရှိနိုင်သည့်ကုန်ကြမ်းများ၊ မျိုးစိတ်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ကြီးထွားမှုအဆင့်များအလိုက်ကိုယ်ပိုင်ဖော်မြူလာများကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ premix ၏ပါဝင်မှုနှုန်းသည် ၀.၁% မှ ၅% အထိကွဲပြားသည် (ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းများကြောင့် (မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ အခေါ်အဝေါ်တူညီခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုတူရိယာများလိုက်လျောညီထွေမှု၊ အစာကျွေးခြင်းလုံခြုံရေးစသည်) ကွဲပြားသည်။ 2.5% premix ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏တိကျသောလိုအပ်ချက်များအတွက်အဖြေပေးနိုင်သည် (premix၊ top feedi ...
၅% စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သောအသားစားအသားစားအသားပေးဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင် D3၊ ဗီတာမင် E၊ ဗီတာမင် K3၊ ဗီတာမင် B1၊ ဗီတာမင် B2၊ ဗီတာမင် B6၊ ဗီတာမင် B12၊ Nicotinic အက်ဆစ်၊ D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, Copper sulfate Zinc sulfate, Manganese sulfate, Sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease etc. မရ။